Celebrity – Na Pann San
ညီထွဋ်ခေါင် ကြောင့် အံ့သြသွားရတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး တို့ရဲ့ ရယ်စရာ ဟာ သ ဗီ ဒီယိုလေး
adminnapannsan | August 17, 2020
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ညီထွဋ်ခေါင် နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး တို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှု ကိုယ်စီရရှိထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ လက်ရှိမှာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေအပြင် ကြော်ငြာတွေကို ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် ညီထွဋ်ခေါင် နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး တို့ ကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက်
Na Pann San W | August 7, 2020
အားလုံး အတွက် ကျွန်တော် မှ တာဝန် ရှိပါတယ် .ဒီတစ်ခါ ပြီးရင်တော့ ဘာမှ ထပ်မရှင်းတော့ ပါ အစ်ကို့ ကို တောက်လျောက် အစ်ကို အရင်းလို ဆက်ဆံတယ် .အကုန်လုံး သိချင်တာတွေ ပြောပြတယ်. ကျွန်တော့် ဦးနောက် ချက်ချင်း တစ်ရက်နီးပါး အလုပ်မလုပ်ေ တာ့ဘူးတို င်ပင်တယ် .တောင်းပန်သင့်
သူ တို့ တွေ ဘယ်လိုတွေ ဖိုက်တင်ပလေးနေလဲ ဇာတ်ရည်လည်အောင် အစုံအလင် ကြည့်နိုင် ပါပြီ ( သိုင်းလောက စဆုံး )
Na Pann San W | June 18, 2020
အောက်မှာ ဇတ်ရည် လည်အောင် လင့်တွေ စုပေးထားတယ်နော် ……… ဒါကရေဗက္ကာဝင်း တင်တဲ့ပို့ နောက်ကျော ကို ဓါးနဲ့ထိုးတာ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါခံခဲ့ ရတယ် သူနဲ့ကိုယ်ပြဒါးတစ်လမ်းသံတစ်လမ်းဖြစ်လာတော့ ကိုယ်ရှိ နေပေမယ့်ဘာမှ မထူးပဲလူပိုကြီးတစ်ယောက်လိုလုပ်နေမယ့်အစား ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ကြဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာ။ချစ်ခြင်းကပူလောင်တယ်။ဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေလဲစိုးရိမ်ပူပန်နေရတော့ ပူလောင်တယ်။မေတ္တာထားနိုင်အောင်ပဲကြိုးစားတော့တယ်……. လတ်တလောမှာ Drama အရမ်းခင်းပြီး တလောကလုံးကို လိမ်ညာနေတဲ့ သူတစ်ယောက် အကြောင်းကို
အန်တီ ဆုံးဖြတ်ချက် မှားသွား တယ်…၊ အကြီးကြီး ဆုံးရှုံး ရတော့မယ်.. ဆိုပြီး ရင်နင့်စွာပြောပြလာ တဲ့ ဦးမန်းဝင်း ဇနီး
Na Pann San W | June 15, 2020
လူ ရွှင်တော်ကြီး ဦးမန်းဝင်းဟာ ဦးနှောက်သွေး ယိုစိမ့်မှု ကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီး တဲ့ နောက်ပိုင်း လုံးဝ သတိပြန်မရ လာတော့ လို့ စိုးရိမ်ဖွယ် အနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရ ပါပြီ။ ဦးမန်းဝင်း ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ နဲ့ ပတ် သတ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်အေးကြူ က ဦးမန်းဝင်း
အဆိုတော် အိမ့်ချစ် တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာလက်မှတ် ရေးထိုးပွဲလေး ..ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်ကြပါစေ
Na Pann San W | June 6, 2020
Congratulations Eaint Chit (အဆိုတော် အိမ့်ချစ် တို့ စုံတွဲ မင်္ဂလာလက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ ပုံရိပ်များ) အဆိုတော် အိမ့်ချစ် တို့ ချစ်သူ နှစ်ဦးကတော့ ယနေ့၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှာ နှစ်ဖက်မိဘများ နဲ့ ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားသူကြီး ရှေ့မှောက်မှာ မင်္ဂလာမော်ကွန်း တင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြ
နို့ ကြိုက်တဲ့ မောင်လေး အတွက် မမ ကိုယ်တိုင် ညှစ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ “ မေပန်းချီ ”
Na Pann San W | June 3, 2020
မေပန်းချီ ဆိုတာ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပို့တွေ ချောမော လှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ ပုရိသတို့ဟုန်းဟုန်းထအားပေးကြသလို သူ့မရဲ့အနုပညာတွေကြောင့် အားပေးသူပရိတ်အခိုင်အမာနဲ့ ရပ် တည်နေ တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ယောက်ဖြစ် ပါတယ်။ အခု အခါမှာလည်း တမူထူးကြားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို နွားခြံထဲသွား ရိုက်ခဲ့ ပါတယ် ။ အမိုက်စားပို့တွေ
နာရီပိုင်း အတွင်း ကြည့်ရှုသူ သိန်းချီဖြစ်သွားတဲ့ ” ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ရဲ့ သီချင်း MTV အသစ် “
Na Pann San W | June 2, 2020
သီချင်း aအးအေးလေးတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ သောတ ကို ဖမ်းစားထား နိုင်ခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုတစ် ယောက် ဒီတစ်ခေါက် မှာလည်း ” SUNSHINE ” ဆိုတဲ့ သူမ ရဲ့ သီချင်းလေးကို MTV ရိုက် ကူးထားတာပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေး ကို အရင်ကနဲ
ဘယ်လောက် ပဲ တရားမှတ်မှတ် ရှေ့ဆက်အသက်ရှင် ဖို့ မတွေးတတ်တော့ဘူး လို့ ဆိုလာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
Na Pann San W | June 1, 2020
နာ မည် တစ် လုံး နဲ့ အနုပညာလောက မှာ ထက်ထက်မိုးဦး ကတော့ ယနေ့ ထက်တိုင် အောင်အောင်မြင်မြင် ရပ်တည်နေဆဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ထက်ထက်မိုးဦး က အသက် အရွယ် တစ်ခု ရောက် ရှိ လာ ချိန် မှာတော့ ကျန်းမာရေး ချူချာလာပြီး
” အများ နဲ့ မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်ပို င်ရှင် မင်းသား နေထူးနိုင် “
Na Pann | May 31, 2020
နေ ထူးနိုင်​ တဲ့ သူ့အ​ကြောင်း​တွေ ​ရေးပြရရင်​ အများကြီးဗျ ​ရေနံ​ချောင်းသား တွင်းကုန်း ဇာတိ ​ရေနံ​ချောင်း ဒီဂရီ​ကောလိပ်​က​နေ ဘွဲ့ရခဲ့တယ်​ ကိုယ့်​ဒူး ကိုယ်​ချွန်​ပြီး ​အောင်​မြင်​တဲ့မင်းသား တ​ယောက်​ဖြစ် ​ခဲ့တယ်​ သူ့ဇာတ်​ကား​တွေ ရဲ့ ရိုက်ကွင်းနေရာ တော်​​တော်​ များများ က ​ရေနံ​ချောင်းမြို့ ကို အ​ခြေ တည် ​တယ်
လယ်လုပ်ပြီး ဘွဲ့ရတဲ့ ထိ ရှာကျွေး ခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို ချမ်းချမ်းသာသာ နဲ့ ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ပေးနေ တဲ့ မင်းသားနေယံ
နေယံဟာ ဗီဒီယို ရုပ်ရှင် များစွာ ရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှု ကို ရရှိ ထား တဲ့ မင်းသား တစ်လက်ပါ… မင်းသားနေယံဟာ သူ့ကို လယ်လုပ်ပြီး ကျွေးမွေးလာတဲ့ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ ခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်.. “သားသမီးတွေကို လယ်ယာလုပ်